Ukulwisana uboya obungathandeki sekuqhubeke zeminyaka, kodwa asikwazi ukuthi lokhu isintu inkinga iye yanquma unomphela. Namuhla, njengoba abantu eminyakeni eyinkulungwane edlule ngokuhamba indlela hair ukususwa, eyethula Egipertskaya indlovukazi Nefertiti - a wax liquid. Nokho, le ndlela wazama futhi ihlolwe ukuze ungeze eziningi ezintsha, kusukela insingo ukuphepha ziphethe laser ukufaka.
Waxing & Izinwele Emzimbeni
Ukuze ukulawula engadingeki izinwele Waxing futhi izinwele ukususwa isetshenziswa. Izinwele Emzimbeni - ukususwa ingxenye cutaneous izinwele, okuyinto akuphazamisi follicle izinwele. Depilatory wasebenzisa izindlela ezihlukahlukene (okhilimu nama-gel), okuyinto ukubhubhisa ingxenye ebonakalayo izinwele. Indlela elula ukususa izinwele - ukushefa, Waxing kungabuye ngokuthi, njengoba kususa engxenyeni engenhla izinwele futhi lichitha follicle izinwele.
Yokukhipha - lokhu kuyindlela elula kakhulu nengabizi ukubhekana uboya obungathandeki, kodwa futhi ngempumelelo okungenani ngoba izinwele uqala zikhule kakade sekuyizinsuku 2-3 ngemva kokuhlinzwa.
Izinwele ukususwa - ukususwa ephelele izinwele, kuhlanganise izinwele izimpande. Izinwele ukususwa ihlinzeka umphumela ngaphezulu emiyo njalo, njengoba isibalo izinwele follicle kuyehla.
Yeka indlela ukukhetha
On the emihle nemibi ekulweni izinwele ngensingo, ke Kuyaziwa.
A ehlukile enhle kuya epilator wethuka woma ongakhonza - idivayisi ekhethekile, okungadingi usike bese idonsa izinwele phandle impande. Izinwele ukususwa siyehla izinwele ukukhula, kodwa kusimo oyinhloko le ndlela - soreness.
Wax epilators, okuyinto akukashintshi kusukela ngesikhathi Nefertiti - futhi abangele ngempela ezingemnandi, ikakhulukazi ezindaweni ezizwelayo.
A ehlukile sina ukuba zonke lezi izinqubo isibe laser hair ukususwa - indlela ephumelelayo futhi cishe kobuhlungu. Ugongolo laser heats acishe kweso futhi amangqamuzana, aqukethe lo mbala melanin futhi abhubhise follicle izinwele. Ukubhujiswa izinwele follicle ngenxa Ukushisa edingekayo millisecond. Inani elifanayo lokugijima kanye nokupholisa, ukuze inqubo akakubangeli ubuhlungu. Futhi isizukulwane esisha lasers, isb Palomar, ukubanda, kutawenteka ngesikhatsi ukuchayeka ishayela hhayi kuphela, kodwa ngaphambi nangemva, isb cishe njalo. Ngakho-ke, amandla ukuthi isetshenziswa ukubhubhisa follicle umuntu akuyona ingozi ngokuphelele. laser hair ukususwa isetshenziswa ezindaweni isikhumba obucayi, kanye ukukhanya futhi vellus izinwele.
Ukuze ususe ngokuphelele izinwele, kuthatha 2-3 zokwelapha, bese ukuwaphinda phakathi kwezinyanga 1.5-2.
Uboya lwesiFulentshi ohlangothini: okuvamile futhi okuhle kakhulu
Kwekhanda ku-ubude obuphakathi: izinhlobo kanye alungise izinwele isithombe
Lena imoto wami omkhulu.
Yini wedding isinkwa? Indlela sokulungiselela yayo
Isiko Legal: umqondo, izici, futhi izici ezinomthelela lasungulwa. Legal Culture Umphakathi
Uju dimorfantovy: ukubuyekezwa, intengo
Dieffenbachia - esiphelweni nezitshalo zitshala
Araucaria Igumbi - ukunakekelwa ekhaya ngoba izinaliti